Bushnell Binoculars ( 20×50 ) forcategory_name
Bushnell Binoculars ( 20×50 ) Bushnell Binoculars ( 20×50 ) Bushnell Binoculars ( 20×50 ) Bushnell Binoculars ( 20×50 )
ကုန်ကျစရိတ်: 33 coins
❖ပြည်တွင်းခရီးပဲသွားသွား၊ ပြည်ပခရီးပဲသွားသွား ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းက ဒေသန္တရ အလှအပ ရှုမျှော်ခင်းတွေကို သေချာ အနီးကပ်ကြည့်ရှုခံစား ပြီးမှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဝေးကြည့်မှန်ဘီလူးတလက်နဲ့ ကင်မရာကောင်းကောင်းတလုံးရယ်
၀ယ်ယူလို့ ရပေမဲ့ မှန်ဘီလူးကတော့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ပေးရပေးရ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်....
ဒါကြောင့်ပေးရတဲ့ဈေးနျှုန်းကလည်းသင့်တင့်မယ် ၊ ၀ယ်ပြီးရင်လည်းစ်ိတ်တိုင်းကျမယ်ဆိုရင်တော့ Bushnell Binocular လေးက သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းတွေဆီ
Photo ရိုက် ခြင်ဒါဖြစ်ဖြစ် Video ရိုက်ခြင်ဒါဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သလို ကြည်လင်တဲ့ ရုပ်ထွက် 1080P ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
ခရီးထွက်တဲ့အချိန် Phone ကို ထောက်ဖို့ Stand လိုနေပါသလား ? Projector ကြည့်ဖိုအတွက် Stand လိုနေပါသလား ?ဒီ Universel Tripod with Remote control လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Remote control အလည်ကောင်မှာ ထည့်သယ်ဆောင်သွားလို့ရအောင် သေးငယ်တဲ့ အပြင် Phone နဲ့ အသုံးပြုခြင်ဒါဖြစ်ဖြစ် Control နဲ့ အသုံးပြုခြင်ဒါဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
$61.76 $96.50 -36%
- 220inchecs အထိချဲကြည့်လို့ရတယ်နော် ။ ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲထည့်ပြီး ဆောင်ထားလို့ ရတဲ့အရွယ် Powerbank နဲ့ တွဲသုံးလို့ရမဲ့ ခရီဆောင် Potable Projector လေးပြပါဆိုရင် Smart Potable Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် တပ်ဆင်ထားပြီး data ဖွင့်ပြီးအဝေးကလှမ်းကြည့်ကာ ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ camera လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.
နေပူ ထဲဖြစ်ဖြစ် သွားလာရင်လာရင်း မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသလား Remote control တစ်ချက်နိပ်၇ုံဖြင့် သင့်ခေါင်းလှည်တဲ့ ဘက် ကို Video / Photo လွယ်လင့်တကူ ရိုက်ပေးနိုင်တဲ့ Remote Control Basket ball cap Camera လေးရှိပါတယ် ။
ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲထည့်ပြီး ဆောင်ထားလို့ ရတဲ့အရွယ် Powerbank နဲ့ တွဲသုံးလို့ရမဲ့ ခရီဆောင် Potable Projector လေးပြပါဆိုရင် Smart Potable Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- ကည် လင် ပျက်သား တဲ့ ရုပ် ထွက် နဲ့ နေ ရာ မေ ရွး သယ် ဆောင် ရိုက် ကူးြ ခင် ပါသလား 4K Ultra HD Action Camera က သ င့်ကို ကူ ညီေ ပး ပါ လိ မ့်မယ်.
GPS တိကျပြီး Video / Photo ကို Natural Color နဲ့ ရတဲ့ အကြမ်းလဲခံ ၊ ကြည့်ဖို့ Display ပါပြီး Follow me mode ပါပါဝင်တ့ Drone ကို ရှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ hubsan h501s standard နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
$88.04 $124.00 -29%
Wirless ပါပြီး ဖုန်နဲ့ ဘာမှ ထပ်မ၀ယ်ဘဲတွဲချိတ်ဖို့ လက်မဆိုက်ကြီးကြီး projector တစ်လုံးရှာနေပါသလား Wirless LED Projector လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
Style အေ န နဲ့ လဲြ ဖစ် တ ကယ် လဲ ရေး လို့ ရြ ပီး အ သုံး0င်တဲ့ Video / photo Camera Style pen ကိုြ ပ ပါ ဆို ရင် အခု 2017 HD Camera Pen Style နဲ့ မိတ် ဆက် ပေး ပါ ရေ စ
ကိုယ်တစ်ရောက်ထဲ ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲဆောင်သွားလို့ရမဲ့ iphone6အရွယ်ဆိုက် ....အထူကတော့ နှစ်လုံးစာ ပေါ့..အသုံးပြုခြင်တယ်ဆိုရင် Selfie Drone ကို ၀ယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
- ကိုယ်တစ်ရောက်ထဲ ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲဆောင်သွားလို့ရမဲ့ iphone6အရွယ်ဆိုက် ....အထူကတော့ နှစ်လုံးစာ ပေါ့..အသုံးပြုခြင်တယ်ဆိုရင် Selfie Drone ကို ၀ယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
Selfie Drone တွေခေတ်စားလာဒါနဲ့အညီ အိပ်ထဲလွယ်လင့်တကူ သယ်ဆောင်လို့ရမဲ့ Pocket Drone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ ဆိုက်အနေနဲ့ လက်ဖ၀ါးတစ်ခုစာရှိပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူတဲ့ Pocket Drone လေး ပါ။
- mobile phone ရှိသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့...အဝေး ရိုက်..ဖုန်းcamera lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
နည်းပညာတွေ မြင့်မားလာတဲ့ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ ကလေးများအတွက် Pen လေးဆွဲရင် ဆွဲထားတဲ့ လမ်းအတိုင်းသွားတဲ့ Pen Magic Truck လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- ပါ့ပေါ့ ပါးပါးသယ်သွားလို့ရပြီ လွယ်လင့်တကူ ရေးဖျက် လုပ်နိုင်တဲ့ LCD Writing Tablet လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ရေစို (ချွေးစို )အကြမ်းခံ နှလုံးခုန်နှန်းနဲ့ blood pressure သိနိုင်ဖို့ လက်ပတ်တစ်ခုရှာနေပါသလား ? Smart Bracelet နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- >ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ GPS ပါတဲ့ Drone ကိုရှာနေပါသလား? HD GPS Tracker Drone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- Voice Intelligent Security Camera ဆို H.264 HD ရုပ်ထွက်နဲ့ Phone မျိုးစုံ (သို့) Computerက တိုက်ရိုက် ကြည့်နိုင် / ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့ အမျိုးအစားလေးပါ။
Bluetooth function လဲပါ RAM speed လဲမြင့် Chip လဲမြင့်တဲ့ ဂိမ်း ကစားလို့ရမဲ့ 4K support ပေးတဲ့ H96 mini 4K TV box လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး ဘယ်သွားသွားအိပ်ထဲအလွယ်တကူထည့်သွားလို့ရမဲ့ စတိုင်ကျပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Foldable Bluetooth Keyboard လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
$61.84 $77.30 -20%
- အရမ်းပါးလွာပြီး အသုံးပြုဖို့လဲ အဆင်ပြေတဲ့ သေငယ်တဲ့ H96 Pro Plus 4K Android TV box လေး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
သေးငယ်တဲ့ ကင်မရာတစ်လုံး လိုအပ်နေပါသလား ? Wifi ပါပြီး Phone ,Computer နဲ့တွဲကြည့်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ ကင်မရာအသေးလေးပြပါဆိုရင် HD Wifi Camera (Night Vision) လေးကိုပြပေးပါရစေ။
- ပြည်ပခရီးထွက်ရင် ဖြစ်ဖြစ် / တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား၊ 100% အမှန် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့Two- way translator ဖြစ်သုံးမလား 4G Hotspot လွင်တဲ့အနေနဲ့ သုံးမလား ၊ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တဲ့ 2018 AI Hotspot Faster Voice Translator လေးက သင့်အခက်အခဲကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ။
$61.74 $77.18 -20%
- Follow me mode ပါဝင်ပြီး မောင်းရအဆင်ပြေတဲ့ camera 2င်္လုးပါ drone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
$153.74 $163.55 -6%
ဈေးသက်သာပြီး ကင်မရာ အထက်အောက် လှည့်လို့ရမဲ့ ကိုယ်ရှေ့က သွားရင် နောက်ကလိုက်နေမဲ့ Drone အမျိုးအစာကိုရှာနေပါသလား Bug series က Second Generation GPS HD Camera Drone နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။